Faah Faahin:Gaadiid Ciidanka Kenya Looga Gubay Dagaalkii Kulbiyoow iyo Diyaarado Meydad Daadgureeyay.
Monday June 23, 2014 - 01:04:25 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in dagaallo culus oo saacada badan qaatay ay ka dhaceen inta u dhaxaysa deegaanka Kulbiyoow iyo Badhaadhe ee dhaca xadbeenaadyada ay wadaagaan Soomaaliya iyo dhulka Soomaalida Kenya gumeysato.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in ciidamada Mujaahidiinta wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ay wadada ugaleen kolonyo katirsan ciidanka gumeysiga Kenya oo xadbeenaadka ku socdaalayay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal inkabadan sedax saacadood oo xiriir ah socday.
Wariyaal ku sugan Jubbooyinka ayaa soo sheegay in afar gaari laga gubay ciidanka Kenya islamarkaana dhimashadu ka badantahay 10 askari.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in gaadiidka lagubay sedax kamida ay yihiin kuwa dagaalka halka midka kale uu yahay gaari nuuca xamuulka qaada ah oo ciidanka Kenya wateen.
Afar kamida diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa dagaalkii maanta ka qeyb qaatay waxayna dhulka Howdka ah ka daadgureeyay dhimasho iyo dhaawac ciidankooda soo gaaray,dad xoola dhaqata ah ayaa sheegay in ay maqleen jugta madaafiic iyo rasaas xooggan oo dhinacyada dagaalamay isweyddaarsanayeen.
Faah Faahinno dheeri ahaa lafilayaa in saacadaha soo socda ay dagaalka Kulbiyoow kasoo baxaan